उपचार पत्ता नलागेको 'निपा'बाट नेपाली कति सुरक्षित? छिमेकी देश भारतभर रोगको भय :: PahiloPost
उपचार पत्ता नलागेको 'निपा'बाट नेपाली कति सुरक्षित? छिमेकी देश भारतभर रोगको भय
24th May 2018, 03:06 pm | १० जेठ २०७५
काठमाडौं : 'मलाई थाहा छैन हाम्रो भेट हुन्छ कि हुन्न। सरी, आफ्नो बच्चाहरुको राम्रो हेरचाह गर्नु।'
'निपा' भाइरसको संक्रमणममा परेपछि भारत केरेलाकी २८ वर्षीया नर्स निली प्याथुसेरीले आफ्नो श्रीमानलाई लेखेको नोट हो यो।
गत सोमबार निपा भाइरसकै कारणले उनको मृत्यु भइसकेको छ। उनका ५ र २ वर्षका २ सन्तान छन्।
निपा भाइरस संक्रमित व्याक्तिहरुको उपचार गर्ने क्रममा नै उनी संक्रमणको सिकार भइन्। रोगले उनकै ज्यान लियो।
निलीको मृत्युपछि पनि आंकलन गर्न सकिन्छ 'निपा' कति खतरनाक भाइरस हो।
२०७१ साल भदौतिर मोरङ जिल्लाको लेटाङ र पथरी गाविसमा ६ जना बिरामीमध्ये ४ जनाको मृत्यु भयो। रोग नियन्त्रण महाशाखाले त्यसबेला निपा भाइरस हुनसक्ने भनी अध्ययन अगाडि बढायो। पछि, अध्ययन पूरा नै हुन सकेन। त्यो निपा थियो या थिएन? यकिन छैन तर औला त्यतैतिर तेर्सियोमात्र।
छिमेकी मुलुक भारतमा यसको संक्रमणले त्रास फैलिएको छ। भारतको केरलामा १० जनाभन्दा बढीले 'निपा' भाइरसकै कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ४० जनाभन्दा बढी संक्रमित छन्। बीबीसी भन्छ, 'मानिसबाट मानिसमा सर्ने भाइरस भएकाले यसबाट संक्रमित हुनेहरु धेरै छन् तर यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन।'
निफा भाइरसबाट जनताहरुलाई जोगाउन केरेलामा सरकारले 'हाई अलर्ट' जारी गरेको छ। विभिन्न मेडिकल क्याम्प सुरु गरेर भाइरसबाट जोगिन जनतालाई आग्रह गरेको छ।
हिमाञ्चल प्रदेशको एक स्कुलका १८ जना यही रोगको सिकार भएर ज्यान गुमाइसकेका छन्।
नेपालमा निपाको सम्भावना कस्तो?
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमाना, भारतमा काम गर्न र पढ्न अहोर दोहोर गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या र जनावरहरुको आयात निर्यात।
यी तीन कारणले नेपालमा निपा भाइरस फैलनसक्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रका रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। भन्छन्, 'यी तिनवटा त मुख्य कारणमात्र भए। नेपालमै चमेरो तथा सुंगुर भएकाले पनि यहीँबाट पनि निपा भाइरस फैलने जोखिम धेरै छ।'
त्यसैले किसान, सर्वसाधारण चिकित्सक सबै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् उनी। भन्छन्, 'हामी सबै निपाको जोखिममा छौँ। हामीले सुरक्षित प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्तिको पूर्व तयारी गरेनौँ भने भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ।'
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यलयले निपा भाइरसबारे आवश्यक चेतना बढाउन र तत्काल आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबै सम्बन्धित मातहत निकायमा परिपत्र गर्ने भनी गृह, कृषि तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गरिसकेको छ। यसले पनि नेपालमा निपा भाइरसको संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ।
नेपालमा यो संक्रमण आउँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार छैन। निपाबाट संक्रमित व्याक्तिहरु २४ देखि ४८ घण्टा भित्रमा बेहोस भई मर्ने पुन बताउँछन्। निपाको संक्रमण फैलिहालेमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उनको कथन छ।
धेरैले यो नाम पहिलोपटक सुनेको हुनसक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, 'यो भाइरस सन् १९९८ मा मलेसियामा पहिलोपटक देखिएको थियो।'
यो भाइरस जनावर र पन्छीबाट मानिसमा सर्छ र पत्ता लगाउन अत्यन्तै कठिन छ। न यसको कुनै उपचार पत्ता लागेको छ न 'निपा' बिरुद्धको भ्याक्सिन नै। सोही कारण यसबाट जोगिन मुस्किल छ। इबोला भाइरसबाट ५० प्रतिशत बाँच्ने सम्भावना छ भने निपाबाट बाच्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून। अर्थात्, निपाको संक्रमण भएपछि ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म मर्ने सम्भावना छ।
निपा भाइरस विशेषगरी किसान अर्थात् पशुपन्छी र जनावरको सम्पर्कमा रहेका मानिसमा देखिन्छ। भारत तथा बंगलादेशमा केही वर्षको अन्तरालमा यो भाइरस देखिँदै आएको बीबीसीले जनाएको छ। चमेरो र सुंगुरबाट यो भाइरस फैलने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
निपा भाइरस टेरोपस (Pteropus) जातको चमेराले फैलाउँछ। उक्त जातको चमेरो नेपालमा पनि भएको बेलायत तथा अमेरिकाको बैज्ञानिकहरुको अध्यनबाट पुष्टि भइसकेको छ। अर्थात्, निपा भाइरस फैलाउने जिवाणु हाम्रो घरवरिपरि हुनसक्छ। किनकि, उक्त अध्यनबाट काठमाडौं चितवन लगायतका जिल्लाहरुमा यो भाइरस फैलने सम्भावना भएको डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्।
निपा नियन्त्रण गर्न किन कठिन ?
डाक्टर पुन केही कारण प्रस्तुत गर्छन् :
अपुग जनशक्ति र कमजोर भौतिक पूर्वाधारहरु।
मानिसबाट मानिसमा छिट्टै सर्ने।
संक्रमित व्याक्ति १ दिनमै मर्न सक्ने हुनु।
यिनै कारणले गर्दा निपा डरलाग्दो भाइरस रहेको बताउँछन् उनी। त्यसैले सचेत हुन बाहेक अन्य उपाए नरहेको उनको तर्क छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निपा भाइरसको संक्रमण भएपछि ज्वरो आउँछ। टाउको दुख्ने र रुघाखोकी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै शरीर धेरै दुख्ने पनि निपाको लक्षण हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार यो रोगको न कुनै उपचार पद्दति छ न कुनै भ्याक्सिन नै। यो रोग विरुद्ध कसरी अघि बढ्ने अध्यन अनुसन्धान नै भइसकेको छैन। त्यसैले निपा भाइरस मेडिकल साइन्टिस्टहरुको टाउको दुखाइ बन्दैछ।
उपचार पत्ता नलागेको 'निपा'बाट नेपाली कति सुरक्षित? छिमेकी देश भारतभर रोगको भय को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।